Shiinaha Glittering Lapel Pins warshad iyo soosaarayaasha | Kingtai
Ku soo dhowow degelkan!
Bookmark iyo taliye
Dawanka Kirismaska ​​iyo qurxinta
2D calaamadda pin
Qalabka 3D Lapel
Naxaas LED Flashing Pins
Khatarta Lapel Pins
Dhimashada pinel pinel
Dhimashadu waxay ku dhacday Lapel Pins
Daabacaad Dijital ah
Musasalka Lapel Glittering
Ku iftiimiso Musmaarrada Lapel ee Madow
Musmaarradii Lapel Fiirsaday
Sawirro Etched Pin
Shaashad Daabac pinel pinel
MEDALS WACYI GALIN
Billadaha Kubadda Koleyga
Pin dhaldhalaalka adag
Waa maxay dhaldhalaalka?
Kudar iskudhaf ah midab dhalaalaya iyo dhaldhalaal meesha nasashada ee biinankaaga ama qadaadiicdaada, ka dibna ku dheji qubbada epoxy si aad u ilaaliso dusha sare kuna dar sheen dhalaalaya.
Xitaa marka la eego iftiinka iftiinka iftiinka, oo ku dar dhimbiillo dheeri ah naqshadda aad horay u ifisay. Tani waa shay loo baahan yahay inuu dugsigu ka ganacsado biinanka!
Glitters-ka waxaa laga sameeyaa silsilado yaryar (badanaa cabirka basbaaska) oo iftiiminaya iftiinka.
Waxaan ka ogaanay dugsiga hoose in dhalaalka uu leeyahay wax xiriir la leh farsamooyinka gacmeedyada ama qurxinta Kirismaska.
Saamayntiisa aad u wanaagsan awgeed, dhalaalka ayaa sidoo kale si weyn loogu isticmaalaa biinanka Ganacsiga Baseball, kuwaas oo sanadkiiba lagu kala iibsado Cooperstown, Pennsylvania
Ku soo bling bini'aadamka dhabarkaaga adoo isticmaalaya dhalaalaya
Glitter-ka waxaa badanaa loo adeegsadaa in lagu xoojiyo magaca koox ama lagu qurxiyo maskuulkiisa.Wuxuu ku yimaadaa midabbo badan, oo ay ku jiraan casaan, buluug, jaalle, cagaar, oranji, casaan, madow, caddaan iyo wixii la mid ah.
Waa wax aan loo baahnayn in lagu xaddido xulashooyinkaaga aag keliya. Dhaldhalaalka waxaad ku ridi kartaa meel kasta oo aad jeceshahay. Caadi ahaan, qiimaha caado kasta waa 15 senti. Si kastaba ha noqotee, tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ku iftiimiso biinankaaga ganacsiga cirka iyo mascot, waxay ku kacaysaa 30 halkii biin maadaama lagu daro in ka badan hal faahfaahin biin. Sikastaba, waad aragtay, waxa dhalaalaya oo dhami waa dahab.
Waxay qabataa qorraxda waxayna ka dhigeysaa pin pin-kaaga caadada ah inuu iftiimo! Maxaa dhalaalaya ayaa loo arkaa qiimo!
Markuu iftiinsado biinku, ayaa inbadan oo ciyaartooyada kale ay doonayaan inay beddelaan!
Astaamaha budada tooshku waa inay xoojiso saamaynta muuqaalka ah ee badeecada, sidaa darteed qaybaha qurxinta waxay leeyihiin dareen isku-dhafan oo isku-dhafan iyo dareen saddex-geesood ah oo dheeri ah.
Astaamihiisu waa: dhalaalka sare ee tooshku wuxuu qurxinta ka dhigayaa mid qurux badan, aad u ifaysa oo cadceedda ka muuqata. Waxay abuuraan saameyn gaar ah, indho qabad, sida qurxinta ama milicsiga.
Shaki kuma jiro inaan ku dari karno midab dhaldhalaal dhaldhalaal ah si aan uga dhigno biinankaaga dhaldhalaalka inay dhalaalaan.
Waxaan badanaaba doorannaa midabka budada tooska ah ee ugu dhow saameynta muuqaalka iyadoo la raacayo lambarka midabka ee naqshadeyntaadu caddaynayso.
Si kastaba ha noqotee, xaaladdan caadiga ah, xoogaa budo bir ah ayaa iftiimin doonta midabbo kale, markaa waxay noqon doontaa farqiga u dhexeeya fikraddaadii hore ee daboolka dhaldhalaalka dhaldhalaalka.
Halkan, kuwa raadinaya kaamilnimada waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan qodobkan;
Haddii aad u baahan tahay kuwa midabada adag ee budada ah, ama midab gaar ah oo budada birta ah, si looga hortago dhibaatooyinka mustaqbalka, fadlan weydii shaqaalaheena iibka inay ku siiyaan sawirro muunad ah si loo xaqiijiyo ka hor inta aan la soo saarin baalal dhalaalaya oo dhalaalaya.
Hore: Daabac Dijitaal Digital daabac ah
Xiga: Ku iftiimiso Musmaarrada Lapel ee Madow
Midab rinjiga la mariyey
Biin daabacaada Dijital ah
Pin pin Lapel
Cinwaanka:No.22, Xinle wadada saddexaad, Xinle park park, Maan Town, Huizhou City, Guangdong, Shiinaha